Osisi aquarium | Azu
na osisi akwarium Ha bụ otu ihe ọzọ nke ịchọ mma anyị ga-eburu n'uche. Karịsịa ma ọ bụrụ na anyị chọrọ itinye ha na akwarium anyị, ebe ọ bụ na anyị ga-amata nkọwapụta nke na-anaghị ahụkarị oge ụfọdụ na nke nwere ike ime ka nkwụsi ike nke akwarium anyị sie ike nke ukwuu.
Ma ọ bụ ya aquarium osisi nwere ike ịbụ mmekorita ma ọ bụ onye iroN'ọnọdụ ụfọdụ, anyị ga-agbaso usoro nke imeghari na akwarium anyị, ka anyị wee ghara ịmacha mmiri ma nye anyị nsogbu.
N'ime oghere a, ị ga-ahụ, ụdị osisi, ndụmọdụ maka iwebata ha na akwarium anyị na-adịghị agwụ agwụ nkọwa n'ụzọ zuru ezu na-enwe ha n'ụlọ anyị na na anyị azụ na-eche nke ọma na ha akwarium. Ọ dị mkpa iburu n'uche nkọwa niile iji lekọta ụmụ anụmanụ anyị.
por Portillo nke German eme 2 afọ .
Mgbe ị nwere akwarium, ị ga-ekpebi ụdị osisi ị ga-edebe maka ịma mma ya na ...
por Portillo nke German eme 3 afọ .
N'isiokwu ndị gara aga anyị lere anya algae na-acha uhie uhie na omimi. Taa, anyị ewetara gị edemede ọzọ metụtara ya. N'okwu a…
Taa, anyị ga-ekwu maka osisi a na-ejikarị eme mmiri. Ọ bụ akpaetu Java. Aha gị…
por Portillo nke German eme 4 afọ .
Maka ịchọ mma na imepụta ebe obibi maka azụ anyị, anyị nwere ike iji osisi na -emepụta ihe. Site…
Mkpụrụ maka akwarium osisi
por Rosa Sanchez eme 5 afọ .
Osisi ndị nwere mmiri karịrị ihe eji achọ mma. Ha bụ ihe dị ndụ ma dịka nke a chọrọ ụfọdụ ...
Osisi na-ese n'elu mmiri maka akwarium
por Rosa Sanchez eme 7 afọ .
Osisi na-ese n'elu mmiri, ewezuga ịbụ ihe eji achọ mma n'ime aquariums, nwekwara ike inye nri maka ụdị azụ ụfọdụ ...
Osisi mmiri na Aquarium
por Viviana Saldarriaga eme 10 afọ .
N'ọtụtụ ọdọ mmiri nke m hụworo na ndụ m, osisi mmiri ndị bi n'ime ya, nwere ...